Guurkii Qarsoodida ahaa - NETBEINS
:Guurkii Qarsoodida ahaa
Guurkii Qarsoodida ahaa
Hooyo iyo Aabe anigoo yar ayey kala tageen. Aniga Hooyo ayaan la koray. Waxey Hooyo daganeed oo ay nin kale ilmo ugu dhashay tuulo ka mida Shabeelleha Dhexe. Markaan weynaaday ayaan kasoo tagay Hooyo, magaalada Muqdisho ayaan usoo waxbarasho doontay. Waxaa magaalada islaan kale ku qaba Aabe. Xiligii dowladda Aabe askari ayuu ahaa, markii dowladdii dhacday qorigiisi ayuu duugtay, kadib Hoggaamiye Kooxeed yadii Muqdisho mid ka mida ayuu la shaqeysan jiray, oo iskala joogi jiray, isagoo sidaas ah ayaan magaalada imid. Iskuul ayuu I geeyey, guriga islaanta eeddo ahna waala I dajiyey, kadib Aabe waxaan is arki jirnay dhawr kii billood ba mar, oo inta badan wuu maqnaa.
By admin April 4, 2019, 8:00 AM
Nolosha Muqdisho ayaan la qabsaday, saaxibo badan oo dariska iyo kuwo aan iskuulka isla dhiganaba u badan ayaan yeeshay. Waxaan is baranay nin ka ahaa waardiye mid ka mida shirkadaha isgaarsiinta, oo xarunteeda weyne u dhaweed iskuulka aan dhigto. Shukaansi kadib waxaan isku afgaranay inaan hoos iska mehersanno, marka laga yimaado inaan ku qanacsanaa ninkaan, waxaa igu riixeysa duruuf nololeed, oo waxaan islahaa amaad nolol run ah ku dambeysaan, oo aad ka guurtaa gurigaan eedo, inta ka horreysa sidoo kale maan daaba aan gabar ahay magaalo caasimad ahna aan joogo, waxkastoon u baahnaa ma heli karin, sidaas darteed marka uu mushaarka soo qaato Shoobin keyga ayaan ka heli jiray. Muddo aan Hoos isaga mehersaneyn kadib, waxaa igu soo baxay Uur. Dhawr mar oo hore ayaan ula tagay codsi ah inaan aqal yeelano, oo uu si cad ii soo doonto, wuuse ka meermeeray.
Markaan la wadaagay arrintii uurka uma soo dhaweyn sidaan filayey, wuu ka diday, wuuna isku key xanaajiyey wuxuuna igu yiri waxaad rabtaa inaad iiga dhammeyso sidaan qarsoodiga uga bixi lahayn, waana kugu kaligaa haddaad uur qaadday. Kaftan ayaan u haystay waase iiga ruumeyey, oo bil dhan dib iiguma soo laaban. Reerkii waa ay fahmeen, inaan uur leeyahay. Aabe isagoo Shabeellaha Hoose ku maqan ayaa telfoon arrintii loogu sheegay, wuxuuna iigu dhaartay hadduu guriga iigu yimaado inuu xabbad igu dili doono, sidaas darteed aanan wajigiisa soo hor istaagin. Waxaa jiray walaalkey iga weyn oo isna Askari ahaa, magaaladana deganaa isagaan damcay inaan xaggiisa aado, isaguna markuu arrintii maqlay isaagaba i raadsanayey si uu ii dilo. Markey talo igu adkaatay, oo aan waayey meel aan ciirsado, ayaan gabar saaxibtey ah, oo iyaduna dul saar ku ah Habaryarteed arrinteyda u sheegay, iyadii baa igu tiri iga war sug intaan Habaryar kasoo dhaadhicinayo, qof marti jecel ma ahan, haddana arrintaadu waa mid cusube.
Dhawr habeen oo ay saaxibtey ku maqneed Habaryar teed, waxaan la seexanayey gabar Shaaxley ah, oo deggan xaafaddeena. Gabadhii saaxibtey ahayd ayaa igu soo noqotay, waxeyna igu tiri Habaryar waan kusoo qanciyey, laakiin waxaan ugu sheegay inaad safar tahay, oo aad si ku meel gaar ah noola joogi doonto. Halkaas ayaan ku noola ilaa uurkeygu dhalmo ku dhawaado. Laakiin markii ay soo dhawaatay dhalmadeydii, oo ah bishii aan ugu cuslaa ayey islaantii Habaryar ahayd, si cad iigu sheegtay ineysan rabin in gurigeeda cunug aan Aabihiis la aqoon ku dhasho (Wacal). Waxaa la isku dayey in laga dhaadhiciyo iney igu sinto inta fooshu ka imaaneyso, wayse diiday. Markale ayaa haddana gabar kale gurigeeda baryo la igu doonay, si aan foosha ugu gaaro. Waxaan dhawr habeen ba guri seexdo, waxaa la gaaray waqtigii foosha, waxaa la I geeyey Isbitaal SOS, maan daaba uu ahaa isbitaalka keliya ee dhalmada ee lacag la’aan ah. Labo beri oo aan foolanayey kadib, qoladii isbitaalku waxey sheegeen inaanan caadi u dhali karin, sidaas darteed ay lama huraan tahay inaan qalliin maro. Isbitaalka waxaa I geeyey gabdhihii saaxibadey ahaa, ee aan mid ba mar gurigooda ku noola, lacag ay iska aruuriyeen ayaa baabur la igu soo saaray. Markii ay ku qeyliyeen Takhaatiirtii yaa gabadhaan ka masuul ah xaalkeedu wuu liita, ayaa la is fiiriyey, saaxibtey ayaa arrinkeyga u sheegtay qoladii SOS.
Waxey codsadeen telfoonka walaalkey, Aabahay iyo ninka cunuga dhalay haddii aan aqaan, kadibna iyagu wici doonaan si ay u saxiixan. Markii u horreysay waxey weceen Aabe, wuxuu yiri haddey rabto ha isku dhimato, ee mardambe ha isoo wicinina. Walaalkey ayaa isna sidaas oo kale ku yiri. Ninkii cunuga dhalay, ayey waceen markuu warkooda dhageystay oo fahmay isagoon u jawaabin ayuu telfoonka dansaday. Markale ayey ku noqdeen Aabe iyo Walaalkey, Aabe waa qaban diiday, walaalkii ayey ku yiraahdeen waan qaleynaa ee haddey dhimato inaan naloo haysan ogow, codkaaguna waa duubanyahay. Markaas ayuu yiri iska jira haddey wax gaaraan, cunuga dila haddaad doontaan laakiin gabadha yaaney waxba gaarin, wuu yimid isaga ayaana I saxiixay, iridda ayuuna ka baxay, mar aan aad u silcay, oo neeftii xitaa aan gabay. Gabar ayaa la igu qalay, waana soo nabad baxnay, laakiin waxaa walwal iyo calool xumo kale ah, xaggeen ku noqoneynaa guri ma lihin, ehel aan aadnana ma leh, markii hore dadkii kaligey i dhibsanayey markaan yeeli maayaan, Umul hala idiin keeno. Gabdhihii ayaa markale lacag iska aruuriyey oo qol ii kireeyey, iina goglay, halkaasna aniga iyo gabadheyda Biil nagu siin jiray 3 bilood ee u horreysay, kadibna aniga ayaa u shaqo tagi jiray gabadheyda.
Way jireen saaxibo i rumeystay, ina aaminsanaa inaanan been sheegeyn. Gabadheyda magacyo kala duwan haloogu yeero, sidii cunugtii Aabo la’aanta ahayd, laakiin waxaan ballan qaaday ineysan ku dhicin dabinkii aan ku dhacay, haddey ku dhacdana aysan waayin waalid iyo walaal u hiiliya. Aabaheed mar aan is aragnay, waxaan u sheegay inuu ilaahey la hortagi doono, gabarnimadeydii uu ku ciyaaray, sumcadeydii uu dilay, ciilkii, xanuunkii iyo walbahaarkii uu i baday inagoo xalaal isku guursannay. Hadda waxaan haystaa gabadheydii oo 6 jir ah, umaleyn maayo inaan guursan doono nin dambe, waxaanse hubaa iney gabadheydu noqon doonto cunuga ugu fiican uguna nolosha wanaagsan.